Ka PNY safaaradii Flash Drive soo kabsado Khasaaray Data
Sidee ayaan u soo ceshano karaa Khasaaray Faylal ay ka My PNY safaaradii USB Flash Drive?
Waxaan ka daadanayo, taas oo ku saabsan PNY safaaradii USB flash drive. Shalay markii aan xiriir la leh aan computer, waxaan ogaaday ahaa in ay qaab. Si aan sameeyey. Ma aanan ogeyn sababta aan u go'aansaday in qaab. Waxaas oo dhan files aan shaqeeyo meheradaha tageen. Ma suurogalbaa ii soo ceshano files aan ka PNY safaaradii flash drive?
Tani dhab ahaantii waa waayo-aragnimo dareemayaasha sugeyso ah, gaar ahaan marka aad leedahay files muhiim ah waxa ku jira. Waxaa laga yaabaa inaad lumiso xogta ka PNY lifaaq flash drive, maxaa yeelay qalad. Si aad u soo kabsado xogta ka PNY safaaradii Recovery, waxaad u baahan tahay in la hubiyo in flash ah waxaa laga garan karaa computer iyo files lumay aan la overwritten by xog cusub. Haddii ay sidaas tahay, software ah soo kabashada xogta aad markaas kaa caawin kara.
Waxaad qaadan kartaa Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac sida isku day ah. Barnaamijkan waxa ay awoodaan in ay dib u soo kabashada kala duwan oo badan oo nooc file ka PNY safaaradii flash drive, oo ay ku jiraan sawirrada, waraaqaha xafiiska, music, videos, archives, iwm No arrinta files yihiin laga badiyay ay sabab u tahay qalad ama qalad nidaamka, barnaamijkan waa inay awoodaan inay soo celiyo xogta laga badiyay.
Download version tijaabo ah Wondershare Data Recovery
Ka PNY safaaradii Flash Drive soo kabsado Data
Halkan ha u fuliyaan dib u soo kabashada la Recovery xogta Wondershare for Windows. Haddii aad isticmaalayso Mac ah, waxaad ka heli kartaa version Mac iyo samayn kabashada in talaabooyin la mid ah.
Tallaabada 1 ka dib rakibidda oo bilaabeyna Wondershare Data Recovery on your computer, waxaad arki doontaa qaab interface ah "Welcome to Wizard Wondershare Data Recovery ah". Guji "Next" in ay sii wadaan.
Fiiro Gaar ah: Waxa kale oo aad ka bedeli kartaa in "Standard Mode". Labada hababka dhow waa isku mid.
Tallaabada 2 Halkan waxa aad u baahan tahay in ay doortaan noocyada file gaar ah aad dooneyso in aad soo kaban ama dooro dhammaan faylasha inuu ka soo kabsado oo guji "Next" in ay sii wadaan.
Tallaabada 3 In tallaabadaas, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan drive adag ee aad PNY safaaradii flash drive in iskaan for files lumay.
Fiiro gaar ah: Hubi in aad PNY safaaradii flash drive si fiican u xiran your computer.
Tallaabada 4 Hadda barnaamijka bilaaban doona aad ka baareyso flash drive. Ka hor inta iskaanka ah, waxaad dooran kartaa "Enable Deep Scan" ama "Enable ceeriin Recovery" on interface ka. Markaas riix "Start" si ay u bilaabaan iskaanka ah.
Talaabada 5 ka dib iskaanka ah, waxaad ku eegaan karo oo ka soo kabsado aad files lumay eegista. Sida aad ka arki kartaa interface ka, ku jira oo dhan ka helay lagu soo bandhigi doonaa qaybaha, sida "graphic", "email", "video", "archive", iwm Waxa kale oo aad ka raadin kartaa file u gaar ah oo ku saabsan sare ee suuqa kala . Plus, waxaad ku eegaan karo sawirada, document files ka hor soo kabashada.
Markaas kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan files aad u baahan tahay oo guji "Ladnaansho" in ay iyaga ku soo celi si aad u computer badbaadiyo.
Fiiro gaar ah: Ammaanka soo kabashada, fadlan ha ka badbaadiyo files soo kabsaday si aad PNY safaaradii flash drive. Waxa fiican si ay u sii qalab lagu kaydiyo kale ama on your computer.
> Resource > Ladnaansho > PNY safaaradii Recovery: Talaabooyinka inuu ka soo kabsado Khasaaray Xogta laga PNY safaaradii Flash Drive